होसीयार ! खाली पेटमा नखानूस् यी खानेकुरा, विष बन्न सक्छ « Lokpath
संसारका आधाजसो मानिसहरु खान नपाएर भन्दा खान नजानेर विभिन्न खाले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या झेल्दै आएका छन् । चिकित्सक भन्छन्, आवश्यकताभन्दा बढी खाएको खानेकुराले शरिरलाई सञ्चो त गर्दैन नै त्यो खानेकुरा शरीरको लागि विषसरह बन्छ । कुन खानेकुरा कुन समय, कति, कसरी र कस्तो अवस्थामा खाने भन्नेमा ध्यान दिनसके मानिसको स्वास्थ्य धेरै राम्रो हुन्छ। मानिस निरोगी बन्छ। सचेत रहनुस् । के हुन् त ति खानेकुरा ? लोकपथ डटकमले केहि हेल्थ टिप्स तयार पारेको छ ।
यी सामाग्री छुटाउनुभएको थियो कि ?
लामखुट्टेले कस्ता मानिसलाई बढी टोक्छ रु जानी राखौं
हामीमध्ये कतिपय खुसी र सुखी जीवनको लागि मरिहत्ते गर्छौ । यति जोगाउन पाए भोलीका दिनमा सुख होला कि भन्छौ । तर आफ्नै स्वास्थ्यमा गम्भिर भएनौ भने हामीले कलपना गरेको आफ्नो जीवन तयतिकै खेर जान्छ । रोग लिएर बाँच्न विघ्नै गारो हुन्छ । हामी आफूले चढ्ने सवारी त बेलाबेलामा अर्थात् किलोमिटर हेरेर सर्भिसिङ गर्छौ भने अमूलय मानव जीवनको महत्व किन नबुझ्ने त्यसैले समयसमयमा स्वास्थ्य परिक्षण पनि गरौँ । योगा गरौँ । एकाग्र हुने कोशिस गरौँ । खुसी होऔँ । परिवारलाई समय दिऔँ । अरुको बारेमा तर्कवितर्क गर्नुभन्दा आफ्नै बारेमा सोचौँ । यी टिप्स एकपटक मनन गर्ने कि ?
यस्तै जानकाकरीमूलक, सूचनामुलक, समाचारमूलक र मनोरञ्जनात्मक सामाग्रीको लागि WWW.LOKPATH.COM LIKE र नजिकै रहेको बेल आईकन क्लिक गर्नुहोस् अनि हाम्रो युट्युब चयानल LOKPATH TV लाई लाईक कमेन्ट सेयर र सब्स्क्राईब पनि गर्नुहोस् । तपाईको आजको दिन शुभ बितोस् । WWW.LOKPATH.COM लगईन गरिरहनुहोला ।
प्रकाशित मिति: २०७६,श्रावण,१५,बुधबार ०४:१९